Sasana Moli - International Burmese Monks Organization: December 2007
သံဃာ့ ဦးသျှောင် ဥက္ကဌ ပီနံဆရာတော်ကြီးက မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ သွေးစည်း ညီညွတ်ရန် မိန့်ကြား
သံဃာ့ ဦးသျှောင် ဥက္ကဌ ပီနံဆရာတော်ကြီးက
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ သွေးစည်း ညီညွတ်ရန် မိန့်ကြား
ဧရာဝတီ | ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
သံဃာ့ ဦးသျှောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ပီနံဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသက မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးနှင့် သာသနာတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် စည်းလုံးညွတ်ညွတ်စွာ ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်ကြရန် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများကို ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနံမြို့ရှိ အဆိုပါ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျောင်းတိုက်၌ ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက မလေးရှားနိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ စသည့်အဖွဲ့အစည်း ၂၀ ခန့်မှ လူ ၁၀၀ ကျော်ခန့်တက်ရောက်သည့် တွေ့ဆုံစည်းဝေးပွဲတွင် ယခုကဲ့သို့ မိန့်ကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းအစည်း အဝေးတက်ရောက်သည့် သံဃာ့ ဦးသျှောင်အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော်တပါးဖြစ်သော ဦးအဂ္ဂ၀ံသက ပြောသည်။
“ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက မြန်မာ့အရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတာကို ဆရာတော်ကြီးက ကဏ္ဍသစ်အနေနဲ့ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ သြ၀ါဒပေးတာပါ”ဟု ဦးအဂ္ဂ၀ံသက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဦးအဂ္ဂ၀ံသသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ရဟန်းပျိုများ သမဂ္ဂမှ ဒု ဥက္ကဌ ဖြစ်သည်။
NLD, ABSDF, လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ စသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မလေးရှားရှိ ရခိုင်၊ မွန်စသည့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များက ခေါင်းဆောင်များက ပီနံဆရာတော်ကြီး၏ သြ၀ါဒ ချမှတ်ချက်များအတိုင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ ကြသည်ဟုလည်း မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ ကိုအောင်နိုင်သူက ပြောသည်။
“မြန်မာ့အရေးအတွက် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ဆောင်ဖို့ သဘောတူကြတယ်၊ အဖွဲ့အားလုံး ပေါင်း ၁၈ ဖွဲ့ ၁၉ ဖွဲ့ လောက်ရှိမယ်၊ အဓိကက တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၊ စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေးပဲ”ဟု
ယမန်နေ့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးက သာသနာတော်အား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံနေရ ခြင်းမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာ ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် ရန် စသည့် အချက်လေးချက်
ပါဝင်ပြီး ဦးဆောင်သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်တော် ၁၀ ပါး နှင့် သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီးအား ပြန်လည် တိုးမြှင့် ဖွဲ့စည်းလိုက် သည့် ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်သည်။
ပြည်ပရှိ သံဃာ့ဦးသျှောင်အဖွဲ့မှ ဦးအဂ္ဂ၀ံသက“ဒီနေ့ ပီနံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကို လာပြီးတော့ ခံယူကြတယ် ဆိုတာ သာသနာတော် ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံနေရခြင်းမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ဆိုတာ အဓိကပါပါတယ်၊ စစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေးလည်း တခါတည်း ပါသွားတာပေါ့၊ အဓိက က သွေးစည်း ညီညွတ်မှု ပါပဲ”ဟု မိန့်ကြားသည်။
Posted by MoeMaKha at 12:39 PM No comments:
သာသနမောဠိ ပဓာနာစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး
ဦးကောဝိဒ အယ်လ်အေတငြ် ဟောုကားသည့်
တရားတော် အူပည့်အစုံ အသံခြေ နားဆင်ရန်
Posted by MoeMaKha at 1:29 AM No comments:
Masoeyein Sayadaw's speech with other Sayadaws at LA
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒက သံဃာသပိတ်သည်ူမတ်စြာဘုရား ဟောုကားသည့် တရားတော်ိံငြ့် အညီူဖစ်သူဖင့် ဆက်လက် ကံဆောင်သြာုးကရန်ိံငြ့် လူထုကလည်း ၀ိုင်းဝန်း သပိတ်မြောက်ုကရန် အလေးအနက် တိုက်တနြ်း
သာသနမောဠိ ပဓာနစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒိံငြ့် အဖြဲႚ၀င် ဆရာတော်မဵား အစုံအညီူဖင့် အမေရိကန်ူပည် အနောက်ူခမ်း ခရီးစဉ် စခန်းသိမ်ုးသ၀ၝဒပေး တရားပြဲ ( လော့အိန်ဂဵလိူမြိႚ) ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ တငြ် အောင်ူမင်စြာ ကဵင်းပခဲ့သည်။
တရားပြဲတော်တငြ် ဆရာတော်ုကီးက သံဃာတော်တိုႚ၏ သပိတ်မြောက် ကံဆောင်မသြည် ဘုရားရငြ် ခဵမတ်ြပေးခဲ့သော တရားတော်ိံငြ့်အညီ ဆောင်ရက်ြခဵက်ူဖစ်ေုကာင်း၊ူပည်သူလူထုကလည်း သံဃာတော်မဵားကဲ့သိုႚ စည်းလုံးညီညတ်ြစြာူဖင့် စစ်အစိုးရိံငြ့် အပေၝင်းအပၝမဵားကို ဆက်လက် သပိတ်မြောက်ုကပၝက သာသနာ့အိံ္ဇရာယ်ုကီးမြ အလ္တွင်ူမန်ဆုံး လတြ်ေူမာက်ခဵမ်းသာုကမည်ူဖစ်ေုကာင်း အကဵယ်တ၀င့် ဟောုကားခဲ့ပၝသည်။
အယ်လ်အေ၊ ဓမ္ထဇောတိကေဵာင်းတိုက်တငြ် တြေႚရသော သာသနမောဠိ (အမေရိကန် အနောက်ူခမ်း) ဆရာတော်မဵား
ူပည်ပရောက်ူမန်မာူပည်သူအားလုံးကလည်း သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်အတူ ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ခုံကူပီး စည်းလုံးညီညတ်ြစြာူဖင့် သာသနာူပြူခင်ိးံငြ့် သာသနာကာကယ်ြစောင့်ရြောက်ရေး လုပ်ငန်းမဵားကို အားပေုးကရန် လိုေုကာင်း မိန်ႚုကားခဲ့သည်။
သက်တော် ၈၁ိံစြ် ရြိူပီူဖစ်သော ဆရာတော်ုကီးမြာ အိံစြ် ၅၀ ကေဵာ် တရားစာပေ သင်ုကားပိုႚခဵသော အာစရိယ ဆရာတော်ုကီး တပၝူးဖစ်သည့်အူပင် ပရိယတ္ဇိ ကဵမ်ူးပြ ဆရာတော်ုကီး တပၝူးဖစ်သည်။ိံစ်ြပေၝင်း ၅၀ အတငြ်း ဆရာတော်ုကီး အခဵိန်ယူပစြုတော်မူခဲ့သော ကဵမ်းစာအုပ် စုစုပေၝင်း ၅ အုပ် ( ၁၀ိံစ်ြလဵင် ၁ အုပ်ိံနြ်း)ူဖစ်ူပီး ထိုကဵမ်းစာအုပ်မဵားကို ကိုးကာူးပီး သံဃာတော်မဵားက ကဵက်မတြ် သင်ယူုကရသည်ူဖစ်၍ူမန်မာူပည်ရြိ သံဃာတော်မဵားမြာ ဆရာတော်ုကီိးံငြ့် ကင်းကြာသည်ဟု မဆိုိုံင်ပေ။
မိံ္ဇလေး မစိုးရိမ် စာသင်တိုက်ုကီး၏ ပဓာန နယက ဆရာတော်ုကီးအူဖစ်လည်း ဦးဆောင်မပြေးခဲ့သူဖင့် ယခိုံစြ် မစိုးရိမ်ိံစြ် ၁၀၀ူပည့် ပြဲတော်တငြ်ူပည်တငြ်းရြိ ကေဵာင်းနေ သံဃာတော်မဵား ဆရာတော်ုကီး ဓာတ်ပုံတော်ိံငြ့် ဆုံးမစာတိုႚကို ထင်ရြားစြာ ခဵိတ်ဆြဲပူဇော်ခဲု့ကသည်ကို ဆရာတော်ုကီးမြာ သတင်းတဆင့်ုကားရသူဖင့် မဵားစြိာံစ်ြသိမ့်ုကည်ိူံးေုကာင်း သိရသည်။ စစ်အစိုးရိံငြ့် အပေၝင်းအပၝမဵားကမူ ဆရာတော်ုကီးကို ၁၉၉၀ူပည့်ိံစ်ြတုံးက သံဃာတော်မဵား သပိတ်မြောက် ကံဆောင်သည်ကြိုိံမ်ိံငြ်းရန် အလိုႚငြာ ထောင်ဒဏ် ၃ိံစ်ြခဵမတြ်ူပီြးိံပ်စက်ခဲု့ကသည်။
ယခု ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာသပိတ် အရေးတော်ပုံတင်ြလည်း ဆရာတော်ုကီးသည်ူပည်ပသာသနာူပြ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသိံငြ့် တကသြောူပည်ပရောက် ဆရာတော်မဵားကို အညီအညတြ် တခဲနက် စုဝေးလ္တွက်၊ သာသနမောဠိ - အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာ ရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပ်ြကို ဖြဲႚစည်ူးပီူးမန်မာူပည်၌ ကဵရောက်နေသော သာသနာ့ဘေးအိံ္ဇရာယ်အပေၝင်းကို စုပေၝင်းကာကယြ်ုကရန်ေုကာင့်ုကစိုက် ဆောင်ရက်ြတော်မူလဵက် ရြိသည်။
ထိုႚနေႚက ဆရာတော်အသီးသီးက မိန်ႚုကားသည့်ုသ၀ၝဒတရား အူပည့်အစုံကို သည်နေရာမြ နားဆင်ိုံင်ပၝူပီ။
Posted by MoeMaKha at 5:14 PM No comments:
Labels: In the News, Speech and Talk
သာသနာ့ ဥသြေဵာင် အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲ့ (အိံ္ဋိယ)
ဖြဲ့ စည်းေုကာင်း ထုတ်ူပန်ေုကူငာခဵက်၊၊
နေႛစြဲ ၊ ၁၃၆၉ ခု နတ္ဇော်လဆန်း (၇)ရက်၊ ၁၆- ၁၂ - ၂၀၀၇
အေုကာင်းအရာ - သာသနာ့ ဥသေဵြာင်အဖြဲ့ (အိံ္ဋိယ) ဖြဲ့ စည်ူးပီးေုကာင်းထုတ်ူပန်ေုကူငာခဵက်၊၊
သာသနာ့ ဥသေဵြာင် ဆရာတော်ုကီးမဵာူးဖစ်ုကသော - ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ (မစိုးရိမ်)၊ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ (ပီနန်)တို့ ၏ ဦးဆောင်မြုကိုခံယူ၍ မိမိသဘောဆိံ္ဋူဖင့် စည်းဝေး တိုင်ပင်၍ သာသနာ့ အကဵြိးစီးပြားတိုႛ ကို ကဵရာအခန်းက္ပ မြ ဓမ္ထ၀ိနယိံငြ့် အညီ ထမ်းဆောငနိုင်ရန်အတကြ် ဗုဒ္ဌ ဘုရား ရင်ြမာန်ငၝးပၝး ကို အောင်ူမင်ရာူဖစ်သော မဟာဗောဓိပင်အောင်တငြ် အောက်ပၝ ဖေၞူပပၝ ရဟန်းတော်မဵာူးဖင့် အောင်ူမင်စြာ ဖြႛဲစည်ူးပီးေုကာင်း ထုတ်ူပန်ေုကူငာအပ်ပၝသည်၊၊
ဥက္ကဌ - ဆရာတော် ဦးပညာဝရ
ဒု ဥက္ကဌ - ဆရာတော် ဦးကောလိနိယ
အတငြ်းရေးမြး - ဆရာတော် ဦးဇနိတ
တြဲဖက်အတငြ်းရေးမြး - ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ
ဘ္ပာရေးမြး - ဆရာတော် ဦးမေဓာသာရ
ူပန်ုကားရေး မြူး - ဆရာတော် ဦးကုသလ၊ ဆရာတော် ဦးဉာဏိံ္ဋ
လုပ်ငန်းစီစစ်ရေး - ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဓဇ
အဖြဲ့ ဝင် သံဃာတော်မဵား - ဦးပညာစက္က၊ ဦးဇာဂရ၊ ဦးဝရသမ္တောဓိ တိုႛူဖင့် ဖြဲ့ စည်းပၝသည်၊၊
Posted by MoeMaKha at 12:22 PM No comments:
Appeal Letter from Sasana Moli to the International Community
ိုံင်ငံတကာရြိ လူမဵြိး၊ ဘာသာပေၝင်းစုံ အဖြဲႛအစည်းမဵား၊ မိသားစုမဵာိးံငြ့် လူသားအာလုံး သိုႛ မေတ္ဇာရပ်ခံခဵက်
နေႛစြဲ - ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇
အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် မြ စတင်ူပီး ဖြဲႛစည်းလိုက်သည့်ူပည်ပရောက်ူမန်မာ သာသနာူပြ ဆရာတော်မဵား ကိုယ်စာူးပသြည့် သာသနာႛဥသ္တွောင် အဖြဲႛခဵပြ်ုကီးမြူမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေး၊ ဗုဒ္ဌူမတ်စြာ သာသနာ ထနြ်းကားရေိးံငြ့်တကြိုံင်ငံတကာရြိ လူမဵြိး၊ ဘာသာပေၝင်းစုံတိုႛ ခဵမ်းသာစြာ အတူတကြ ယဉ်ြတြဲနေထိုင်ရေးတိုႛကို ရြေးရြူပီး အောက်ပၝ အခဵက်မဵားကိုိုံင်ငံတကာရြိ ခေၝင်းဆောင်ုကီးမဵား၊ ဘာသာရေး၊ လူမရြေး အဖြဲႛအစည်းမဵာိးံငြ့် စာပေအိုံပညာရင်ြမဵာိးံငြ့်တကြ အသိပညာရငြ်၊ အတတ်ပညာရငြ်ုကီးမဵာိးံငြ့် မိသားစုမဵား အားလုံးသိုႛ မေတ္ဇာရပ်ခံအပ်ပၝသည်။
(1)ူမန်မာူပည်ရြိ ရဟန်းရင်ြလူပည်သူအပေၝင်းတိုႛသည် လက်ရြိစစ်အစိုးရလက်အောက်တငြ် မတရား ဖမ်းဆီးခံရူခင်း၊ဖြိံပ်ခံရူခင်း၊ ထောင်ခဵခံရူခင်း၊ နေရပ်ဒေသမဵားမြိံင်ြထုတ်ခံရူခင်း၊ လတ်ြလပ်စြာ ကိုးကယ်ြခငြ့်၊ ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခငြ့်မဵား ပိတ်ဆိုႛခံရ၍ သာယာဝေူပာမမြဵား ဆိတ်သုဉ်းနေူခင်ိးံငြ့်တကြ အထေထြေ ဆင်းရဲဒုက္ခ ကပ်ုကီး ၃ ပၝး ဆိုက်ရောက်နေပၝသူဖင့်၊ိုံင်ငံတကာ မိသားစုမဵားက ကရုဏာတရား၊ မေတ္ဇာတရားမဵား ရြေႛထားလဵက် ၀ိုင်းဝန်း ကာကယြ် စောင့်ရြောက်ပေုးကပၝရန် တောင်းပန်အပ်ပၝသည်။
(2) ကမ္တာကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႛခဵပြ်ုကီး၊ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု သမ္ထတမိသားစု၊ အစိုးရိံငြ့် လတ်ြတော်အမတ်မင်းမဵား အားလုံး၊ူဗိတ်ိန်ိုံင်ငံ ၀န်ုကီးခဵပြ်ိံငြ့် အစိုးရအဖြဲႛ၀င်မဵား၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖြဲႛ၀င်ိုံင်ငံခေၝင်းဆောင်မဵား၊ ကနေဒၝိံငြ့်ုသစေုတးလဵ မြ အစိုးရမင်းမဵားကူမန်မာစစ်အစိုးရကို ၀ိုင်းဝန်ူးပစ်တင်မမြဵား၊ အရေးယူမမြဵား ဆောင်ရက်ြပေုးကသည်ကို ကေဵးဇူး အထူးတင်ရြိပၝသည်။ ဆက်လက်၍လည်ူးမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းသာယာရေးသိုႛ အူမန်ဆုံးရောက်ရြိလာရန် အရေးယူမမြဵား အရြိန်ူမငြ့်ပေးစေ လိုပၝသည်။
(3) ခရစ်ယာန် ပုပ်ရဟန်းမင်ုးကီး၊ ဒလိုင်းလားမား၊ ဒက်စမနြ် တူးတူး အစရြိသည့်ိုံင်ငံတကာ ဘာသာရေး ခေၝင်းဆောင်အသီးသီးကူမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေးအတကြ် အာရုံစိုက်ူပီး ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုလာုကူခင်းကို ကေဵးဇူးတင်ရြိပၝသည်။ အမေရိကန် ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးမလြည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ခဵီူးမငြ့်ူပီူးပည်တငြ်းရြိ သံဃာအာဇာနည်ူမန်မာရဟန်းတော်မဵားကို ဂုဏ်ူပသြည့်အတက်ြလည်း အားတက် ၀မ်းေူမာက်မိပၝသည်။ ဆက်လက်၍လည်ိးိုံင်ငံတကာရြိ ဘာသာရေး၊ လူမရြေး အဖြဲႛအစည်းအသီးသီးကူမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေးအတကြ် ၀ိုင်းဝန်း ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုပေုးကစေလိုပၝသည်။ သိုႛမသြာ ကမ္တာသူ ကမ္တာသား အားလုံး၏ ကူညီ စောင့်ရြောက် ကာကယ်ြမမြဵာူးမန်မာူပည်သူပည်သားတိုႛ ရရြိမည်ူဖစ်ပၝသည်။
(4)ိုံင်ငံတကာ လတြ်ူငိမ်းခဵမ်းသာရေး အဖြဲႛုကီး၊ ကမ္တာလူႛအခငြ့်အရေးအဖြဲႛုကီး၊ နယ်ူခားမဲ့ စာနယ်ဇင်းဆရာမဵား အဖြဲႛိံငြ့်ိုံင်ငံတကာ အလုပ်သမား အခငြ့်အရေးအဖြဲႛခဵပြ် အစရြိသည့် လူႛအခငြ့်အရေးကာကယြ် စောင့်ရြောက်ရေးအဖြဲႛ အသီးသီးမနြေ၍ စစ်အစိုးရ၏ လူႛအခငြ့်အရေး ခဵြိးဖောက်မမြဵား၊ ရာဇ၀တ်မမြဵားကို စာရင်ူးပစြု ထုတ်ဖော် တင်ူပနေသည့်အတက်ြလည်း ကေဵးဇူးအထူးတင်ရြိပၝသည်။ ရြေႛဆက်၍လည်း စစ်အစိုးရ၏ လူႛအခငြ့်အရေး ခဵြိးဖောက်မမြဵား၊ မတရားဆောင်ရက်ြနေမမြဵားကိုိုံင်ငံတကာ မိသားစုမဵားက ၀ိုင်းဝန်း ဖော်ထုတ်ူပီး၊ အရေးယူပေုးကပၝရန် တောင်းပန်အပ်ပၝသည်။
(5)ူပည်တငြ်ူးပည်ပရြိူမန်မာရဟန်းရင်ြလူ အပေၝင်းမြာူမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် သာသနာရေး အတကြ် အသက်၊အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်မဵား စနြ်ႛလတြ် စနြ်ႛစာူးပီး ဆောင်ရက်ြနေုကရပၝသည်။ုကားသိူမင်တြေႛ နေရသည့်ိုံင်ငံတကာက အစိုးရမဵား၊ ဘာသာရေး၊ လူမရြေး၊ ပညာရေိးံငြ့်တကြ အသိအတတ်ပညာ ၀န်းကဵင်မြ မိသားစုမဵား အားလုးံက မေတ္ဇာ၊ ကရုဏိာံငြ့် ကိုယ်ခဵင်းစာတရား လက်ကိုင်ထာူးပီး တယောက်တလက်ူဖင့် ၀ိုင်းဝန်း ကာကယြ် စောင့်ရြောက်ပေုးကပၝရန် တောင်းပန်အပ်ပၝသည်။
(6) မိမိတိုႛ ရဟန်းတော်မဵားကလည်း ဗုဒ္ဌတရားတော် အဆုံးအမမဵာိးံငြ့်အညီူမန်မာူပည်သားမဵာိးံငြ့်တကြ ကမ္တာမိသားစုမဵားအားလုံး သြေးစည်းညီညတ်ြရေး၊ သြေးမကြဲုကဘဲူငိမ်းခဵမ်းရေးကို လက်တြဲဆောင်ရက်ြသြားပၝမည်။
ယခု ထုတ်ူပန်ခဵက်ကို သာသနာႛဥသ္တွောင် အဖြဲႛခဵပြ်၏ ရဟန်းသံဃာအသီးသီးက မိမိတိုႛ သီတင်းသုံးရာ ဒေသ၊ ဌာနမဵားရြိ မိသားစုမဵား၊ အဖြဲႛအစည်း အသီးသီးသိုႛ တညီတညတ်ြတည်း ရငြ်းလင်းတင်ူပုကူပီး ညီညတ်ြသောူငိမ်းခဵမ်းရေး အင်အားမဵား တည်ဆောက်ုကမည်ူဖစ်ပၝသည်။
ပဓာနာစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒၝဘိဝံသ
You can download the full English / Burmese PDF file from here -
Posted by MoeMaKha at 11:06 AM No comments:
Posted by MoeMaKha at 10:58 AM No comments:
USF Honors Burmese Buddhist Monks During Commencement
Sayadaw U Kovida (center) accepts an honorary doctorate on behalf of the Buddhist monks of Burma duringaDec. 14 commencement ceremony.
Expressing his heartfelt appreciation in accepting an honorary doctorate on behalf of the Buddhist monks of Burma, Sayadaw U Kovida said the University of San Francisco's Dec. 14 tribute was proof that people care about the suffering of the voiceless at the hands of brutal military regimes around the world.
In September, thousands of Burmese Buddhist monks demonstrated peacefully and nonviolently against their country's repressive military regime, promptingabrutal response from the government. During and after the demonstrations, according to international media, thousands of monks were arrested, and many were beaten and killed.
"This honor gives all of us inside and outside Burma much needed encouragement to carry on with conviction," said Sayadaw U Kovida at the commencement ceremony. He promised to relay to the Burmese monks the message of support from USF, which awarded them collectively with an honorary degree.
Sayadaw U Kovida,adistinguished exiled Burmese monk now living inaNew York monastery, was himself imprisoned by the Burmese military dictatorship for his participation in the 1988 pro-democracy demonstrations against the government.
"We honor the monks of Burma to help keep the Burmese struggle for democracy in the minds and hearts of those of us who enjoy the freedoms they are struggling to achieve," said USF President Stephen A. Privett, S.J. before the ceremony "These are extraordinary, modern-day heroes and persons of faith committed to buildingabetter world, even at the risk of arrest, beatings, and death. We celebrate and support their courageous, nonviolent demonstrations, their continuing struggle forafair and representative government, and the selfless leadership that is giving an entire nationataste of freedom. These are the kind of people we hope our graduates will be."
The monks exemplify USF's moral commitment to educate minds and hearts to change the world, according to the honorary degree citation. The citation also drawsacomparison to the six Jesuits killed in El Salvador (along with their housekeeper and her daughter) 18 years ago for their outspoken criticisms of an equally repressive government.
"As we have honored our Jesuit brothers, this Jesuit university now honors the Burmese monks of Burma for their courage, compassion, and commitment to seeking to protect the human and democratic rights of the Burmese people in the face ofaharshly brutal military dictatorship," the citation states. "The Buddhist monks of Burma serve as an inspiring role model for our students, and they embody the ideals that guide our educational efforts. The chant of 'Do-aye' ('It is our task'),astatement of determination heard on audio recordings from Burma during the protests, evokes the passion we hope will catalyze our students to accept their responsibility for righting the world's wrongs."
Sayadaw U Kovida's history of standing up against the military junta and being jailed for doing so made him an ideal representative of the monks being honored.
"I am thrilled and honored to accept this honorary degree on [their] behalf," Sayadaw U Kovida said during the ceremony. He recognized USF for its tradition of honoring those who work for peace and justice, including the Jesuits killed in El Salvador in 1989 and the Dali Lama, who received an honorary doctorate from USF in 2003.
Posted by MoeMaKha at 1:28 AM No comments:
Posted by MoeMaKha at 12:48 AM No comments:
Posted by MoeMaKha at 9:10 AM No comments:
Labels: In English, Speech and Talk
USF honor Burmese Monks in Burma with Honor Degree
ူမန်မာသံဃာတော်မဵားအား ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ပေးအပ်ပြဲ
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်တငြ် ကဵင်းပ
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇
္ဘပီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတငြ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာဆိံ္ဋထုတ်ဖော်ခဲု့က္ဘပီူးမန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖြိံပ်မမြဵားကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်ူမန်မာရဟန်းတော်မဵားအား ဂုဏ်ူပပြေးအပ်သည့် Doctor of Humane Letters အမည်ရြိ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛပေးအပ်ပြဲကို ယနေႛ ညနေ ၃ နာရီခြဲတငြ် အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယာူးပည်နယ် ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႛတငြ် ကဵင်းပခဲ့သည်။
၁၈၅၅ ခိုံစ်ြက စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်က ပေးအပ်သည့် ယင်းဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ခဵီူးမငြ့်ပြဲကို ၄င်းတက္ကသိုလ်၏ ဘြဲႛိံငြ်းသဘင်အခမ်းအနားဋ္ဌကီးတငြ် ကဵင်းပခဲူ့ခင်ူးဖစ်္ဘပီူးမန်မာသံဃာတော်မဵားကိုယ်စား သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႛဋ္ဌကီး၏ နာယက ဆရာတော် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ဦးကောဝိဒ က ရကရြောက်လက်ခံခဲ့သည်။
့ကရောက်လာသော သံဃာတော်မဵား ကို ဖူးတြေႛရစဉ်
St. Ignatius Church ၌ူပလြုပ်သော အဆိုပၝ အခမ်းအနားသိုႛ ဆန်ဖရန်စင်္စကို ပင်လယ်အော်ဒေသိံငြ့် လော့စ်အိန်ဂဵလိစ်္ဘမြိႛတိုႛတငြ် သီတင်းသုံးနေသည့် သံဃာတော် ၈ ပၝိးံငြ့်ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လပ်ြရြားဆောင်ရက်ြသူအခဵြိႛလည်း တက်ရောက်ခငြ့်ရရြိခဲ့သည်။
ဘြဲႚိံငြ်းသဘင်စင်ူမင့်တငြ် ဆရာတော်ဘုရာုးကီးကို တက္ကသိုလ် အဓိပတိ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ုကီး ပရီဗက်ိံငြ့်အတူ တြေႚရစဉ်
္ဘပီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းအတငြ်ူးမန်မာူပည်တငြ်းရြိ သံဃာတော်မဵား၏္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋထုတ်ဖော်မြ မတ်ြတင်းဓာတ်ပုံမဵာိးံငြ့် ရငြ်းလင်းခဵက်စာမဵားကို အခမ်းအနား မစတင်မီကပင် ဆလိုက်ထိုး၍ူပသခဲ့သည်။ ဘြဲႛိံငြ်းသဘင်အခမ်းအနား စတင်္ဘပီး မုကာမီပင် စစ်အာဏာရင်ြမဵား၏ ဖြိံပ်မမြဵားအား ရဲဝံ့စြာ ရင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ူမန်မာသံဃာတော်မဵားကို ခဵီူးမငြ့်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛကို တက္ကသိုလ်အဓိပတိ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ုကီး ပရီဗက် က အပ်ိံငြ်းခဲ့္ဘပီး မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီးက လက်ခံခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအတငြ်း သံဃာတော်မဵား၏ အုကမ်းမဖက် လပ်ြရြားမမြဵားကိုိံင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာမဵားမတြဆင့် ကမ္တာကူမင်တြေႛခဲ့ရေုကာင်း၊ အဆိုပၝ လပ်ြရြားမမြဵားကို စစ်အစိုးရကုကမ်းတမ်းစြာ တုံႛူပန်ခဲ့္ဘပီး ထောင်ိံငြ့်ခဵီသည့် သံဃာတော်မဵားအား ဖမ်းဆီးခဲ့သလို သံဃာတော်အမဵားအူပားလည်း ပဵံလန်ြတော်မူခဲ့ရေုကာင်း၊ ယင်းကဲ့သိုႛ ရဲဝံ့မကြို ဂုဏ်ူပသြည့်အနေူဖင့် ဤဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ခဵီူးမငြ့်ရူခင်ူးဖစ်ေုကာင်း ကေဵာင်းအုပ်ဆရာဋ္ဌကီးက မိန်ႛုကားခဲ့သည်။
ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ဘြဲႚိံငြ်းသဘင် မိန်ႚခနြ်းေူပာုကားနေစဉ်
ဆရာတော်ဋ္ဌကီးက ကေဵးဇူးတင်စကာူးပန်လည်မိန်ႛုကားရာတငြ်ူမန်မာူပည်ရြိ သံဃာတော်မဵား၏ ကိုယ်စား ဂုဏ်ူပဆြု လက်ခံရသည့်အတကြ် ဂုဏ်ယူမိေုကာင်း၊ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတက္ကသိုလ်၏ ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ်ူပလြေ့ရြိသည့် အစဉ်အလာကိုလည်း ဂုဏ်ယူမိေုကာင်း၊ ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ခဵီူးမငြ့်ူခင်းမြာ စစ်အာဏာရင်ြမဵား စစ်အစိုးရမဵားအား ဆက်လက်တိုက်ပြဲဝင်နေသည့် ဒီမိုကရေစီရေး္ဘငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် လတြ်ေူမာက်ရေး အင်အားစုမဵားကို ကမ္တာူ့ပည်သူမဵားက မမေ့လေဵာ့ဘဲ အားပေးထောက်ခံနေသည်ကို သက်သေူပလိုက်ူခင်ူးဖစ်ေုကာင်း၊ူပည်တငြ်းသံဃာတော်မဵားကိုယ်စာူးပည်ပရြိ သံဃာတော်အားလုံး တစိတ်တ၀မ်းတည်း ရပ်တည်ကာ သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႛဋ္ဌကီးအာိးိုံင်ငံတကာ မိသားစိုံငြ့်အတူမန်မာူပည်္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ကမ္တာ့္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးကို ဆောင်ရက်ြစဉ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ခဵီူးမငြ့်ခံခဲ့ရူခင်းေုကာင့် ပိုမိုအားတက်မိေုကာင်း၊ူမန်မာသံဃာတော်မဵားအပေၞ ဂုဏ်ူပခြဲ့သည့် ဤတက္ကသိုလ်မြ ပုဂ္ဂြိလ်မဵားကိုလည်း မဝေးတော့သည့်ကာလတငြ်ူမန်မာူပည်သိုႛ ဖိတ်ခေၞ၍ူပန်လည်ဂုဏ်ူပြိုံင်မည်ဟု မ္တွော်လင့်ေုကာင်း စသူဖင့် မိန်ႛုကားခဲ့သည်။
ထိုႛနောက် ဘြဲႛိံငြ်းသဘင် အခမ်းအနား ဆက်လက်ကဵင်းပခဲ့္ဘပီး အခမ်းအနားအတငြ်း ဘြဲႛလက်မတြ် တက်ရောက် လက်ခုံကသည့် အမေရိကန် ကေဵာင်းသားအခဵြိႛက မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီးအား ဂၝရ၀ူပခြဲု့ကသည်။ အခမ်းအနား မ္ဘပီးဆုံးမီ ဆရာတော်ဋ္ဌကီိးံငြ့် ရကရြောက်လာုကသော သံဃာတော် ၈ ပၝးက ဗုဒ္ဌဘာသာ ထုံးစူံဖင့် ဆုတောင်းမေတ္ဇာပိုႛသခဲု့က္ဘပီး ညနေ ၅ နာရီတငြ် အခမ်းအနား္ဘပီးဆုံးခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီယားဒေသတငြ် သီတင်းသုံးနေုကသော သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြက သံဃာတော် ၈ ပၝးကလည်း ဆရာတော်ုကီိးံငြ့်အတူ ဘြဲႚိံငြ်းသဘင်ကို ခဵီူးမငြ့်တက်ရောကိုကူပီး တရားစာမဵာူးပိင်ြတူရတ်ြဖတ်ူပီး အခမ်းအနားကို နိဂုံးခဵပ်ြပေးခဲ့စဉ်
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်သည် လန်ြခဲ့သည့် အိံစြ် ၂၀ က အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး တငြ် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် The Society of Jesus အဖြဲႛ၀င် ၆ ဦးကို ဂုဏ်ူပခြဲ့္ဘပီး ၂၀၀၃ ခိုံစ်ြကလည်း တိဗက်ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး ဒလိုင်းလားမား ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ အပ်ိံငြ်းခဲ့သည်။
ဘြဲႚိံငြ်းသဘင်အခမ်းအနားတငြ် သံဃာတော်မဵား နေရာထိုင်ခင်း၊ ဝေယဵာဝင်္စိံငြ့် ဘာသာူပန်ပေူးခင်းတိုႚကို ဆန်ဖရန် ဘေးဧရိယာအေူခစိုက် မိုးမခ စာနယ်ဇင်း ၀ိုင်းတော်သားမဵားက ကူညီဆောင်ရက်ြခဲု့ကူပီး၊ မိုးမခ မြ မောင်ရစ် ဆရာတော်ုကီး၏ မိန်ႚခနြ်း ဘာသာူပန်ကို ဖတ်ုကားနေစဉ်
Posted by MoeMaKha at 11:29 PM No comments:
သာသနာ့မောဠိ မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ
အမေရိကန်ိုိံင်ငံ ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်မြာေူပာုကားတဲႛ မိန်ႛခနြ်း
အိုမန်မိာုိံင်ငံရြိ သံဃာတော်မဵား ဘုရား၊
ဒီနေႛဟာ ၁၃၆၉ခု နတ္ဇော် လဆန်း ၅ရက်နေႛ ၂၀၀၇ခု ၁၂လ ၁၄ရက်နေႛူဖစ်ပၝတယ်၊၊ တပည်ႛတော် ယခု အမေရိကန်ိုိံင်ငံ ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႛ ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသို်လ် ကေဵာင်းဝင်းထဲရြိ စိန်ႛအစ်ကနေတစ် ဘုရားကေဵာင်း မနြေ္ဘပီူးမန်မိာုိံင်ငံရြိ သံဃာတော်မဵားအား ပန်ုကားနေပၝတယ်၊၊ အဲဒီနေရာကို ရောက်ရြိ နေရတာက ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛကို လက်ခံဘိုႛ ရောက်နေတာူဖစ်ပၝတယ်၊၊
မတရားဖြိံပ် ညငြ်းဆဲနေသော စစ်အစိုးရကို ဆန်ႛကဵင်၍ အုကမ်းမဖက် အိုံနည်ူးဖင်ႛ သတ္ဇိရြိရြိ ဆိံ္ဋူပခဲႛုကသော သိန်းဂဏန်းရြိ ရဟန်းတော်မဵားကို ယခု ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးက အလေးအနက်ူပတြဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ကို အရင်ြဘုရားတိုႛကိုယ်စား တပည့်တော် လာရောက် လက်ခံရသည့်အတကြ် ဂုဏ်ယူမိပၝတယ်။
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးဟာ အရငြိဘုရားတိုႛကဲ့သိုႛ တရားမ္တွတမြ။ လတ်ြလပ်ခငြ့်ိံငြ့် ဒီမိုကရေစီရေးတႛိုအတကြ်ူငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပ ရပ်တည်ရဲတဲ့၊ အသက် စည်းစိမ်တိုႛကို စနြ်ႛလတ်ြရဲသူ အာဇာနည် သူရဲကောင်းမဵားကို အစဉ်အဆက် အလေးအနက်ူပြ ဂုဏ်ယူရဲတဲ့ ကေဵာင်းတော်ုကီူးဖစ်တဲ့အတက်ြလည်း ဂုဏ်ယူမိပၝတယ်၊
လန်ြခဲ့တဲ့ အိံစြ် ၂၀က အာဏာရငြ် အယ်ဆာဗေးဒၝးမြာ ဆိုဆိုင်ယတီအောဖ့် ဂဵီးဆက်ရဲႛ ခရိယာန် ညီအကိုတော် ၆ ဦး လုပ်ုကံသတ်ူဖတ်ခံရစဉ်က ဂုဏ်ူပခြဲု့ကသလို၊ ၂၀၀၃ ခိုံစ်ြမြာတုန်းက တိဘက်ိုံင်ငံတော် အဓိပတိ ဒလိုင်းလားမားကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ခဵီူမငြ့်ခဲု့ကသလို ယခုလည်း အရင်ြဘုရားတိုႛူမန်မာ ဗုဒဍ္ဍဘာသာ သံဃာတော်အားလုံးကို သည်တက္ကသိုယ်ုကီးက တစိတ်တည်း တ၀မ်းတည်း အားပေး၊ ဂုဏ်ူပြေုကာင်း ထောက်ခံေုကာင်ူးပလိုက်သည့်အတကြ် တပည့်တော်က သံဃာတော်မဵားကိုယ်စား မဵားစြာ ကေဵးဇူးတင်ရြိပၝေုကာင်းေူပာုကားလိုပၝတယ်။
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးက အဓိပတိမဵား။ ဆရာ ဆရာမ မဵား၊ မိဘမဵား နဲႛ ဧည့်သည်တော် အပေၝင်းတိုႛ -
ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ပေးအပ်လိုက်တာဟာ စစ်အာဏာရင်ြမဵား၊ စစ်အစိုးရမဵားကို ဆက်လက်တိုက်ပြဲဝင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး။ူငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် လတြ်ေူမာက်ရေး အင်အားစုမဵားကို ကမ္တာႛူပည်သူလူထုတ၀မြ်းက မမေ့မလ္တွော့ဘဲ ထာဝရ အားပေးထောက်ခံ ကာကယြ် စောင့်ရြောက်မတြိုႛ ရြိနေေုကာင်း သက်သေူပသမြ တစ်ခုဖစ်ပၝတယ်။
ကမ္တာတ၀မြ်းမြိာံတ်ြပိတ်ခံနေရတဲူ့မန်မာူပည်ကဲ့သိုႛသော ရဟန်းရင်ြလူ ကေဵာင်းသာူးပည်သူတေအြတကြ် လတြ်ေူမာက်တဲ့ အရပ်ဒေသက လတ်ြလပ်မြ။ူငိမ်းခဵမ်းမြိံငြ့် ဒီမိုကရေစီ လူအဖြဲႛအစည်ုးကီးက တတ်စမြ်းသလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရကြ်ုကဖိုႛ။ ဆက်လက်ူပီိးိုံင်ငံတကာက အစိုးရမဵား။ စီးပြားရေး၊ ပညာရေး။ လူမရြေး၊ ဘာသာရေး အဖြဲႛအစည်းမဵား အားလုံးက အရြိန်ူမငြ့် အရေးယူပေုးကဖိုႛ အတကြ် သည်တက္ကသိုလ်ုကီးက ထင်ရြားတဲ့ စူံပ နမူနာ တခုဖစ်တယ်လိုႛ ယုံကည်ပၝတယ်။
တပည့်တော်တိုႛကိုယ်တိုင်သည်လည်ူးမန်မာူပည်တငြ်းက သံဃာတော်မဵား ကိုယ်စား၊ူပည်ပကူမန်မာသံဃာတော်မဵား အားလုံး တစိတ်တ၀မ်း၊ တညီတညတ်ြတည်း ရပ်တည်လ္တွက် သာသနာ့မောဠိ အမည်ူဖင့်ူမန်မာသံဃာအဖြဲႛအစည်း ဖြဲႛစည်ူးပီိးိုံင်ငံတကာ မိသားစုမဵားနဲႛအတူမန်မာူပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေး၊ ကမ္တာူငိမ်းခဵမ်းရေးကို ဆောင်ရကြိနေစဉ် ယခုကဲ့သိုႛူမန်မာူပည်တငြ်းက သံဃာတော်မဵားအတကြ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႛ ကိုယ်စာူးပြ လက်ခံရရြိသည့်အတကြ် ပိုမို အင်အားရြိမိ။ အားတက်မိပၝတယ်။
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးက ဘြဲႛယူ ကေဵာင်းသားမဵား အပေၝင်းတိုႛ -
ူမန်မိာုိံ်င်ငံ ဗုဒ္ဌဘာသာ ရဟန်းတော်မဵားကိုယ်စား ကဋ္ဋိုံ်ပ်က ယခုကဲ့သိုႛ ဂုဏ်သိက္ခာူပည့်သည့် တက္ကသိုလ်ုကီးမြ ဘြဲႛလက်မတ်ြမဵား ခဵီူးမငြ့်ခံရသည့် ကေဵာင်းသားမဵားးအတကြ် ဂုဏ်ူပစြကားေူပာုကားပေးပၝမယ်၊၊
ဤတက္ကသိုလ်ရဲႛ ဆောင်ပုဒ်က လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ အဲဒီဆောင်ပုဒ်ဟာ ဗုဒ္ဌဟောုကားတော်မူသော တရားတော်နဲႛ ညီပၝတယ်၊၊ ဗုဒ္ဌက ဒီလိုဟောပၝတယ်၊၊
သုတံ ပညာယ ၀ဒ္ဌနံ
ပညာယ အတဉံ ဇာနာတိ
ဥာတော အတေဉာ သုခၝ၀ဟော (ထေရ ဂၝထာ ) ၁၄၁
" သုင်္ုံခၝ ဆရာစကား နာခံ မတ်ြသားသင်ယူလေႛ ရြိသူသည် သုတ၀ဒ္ဌနီ ဗဟုသုတ တိုးပြား၏၊ သုတံ ဗဟုသုတသည် ပညာယ၀ဒ္ဌနံ ဥာဏ်ပညာ တိုးပြားစေ၏၊ ပညာယ ဥာဏ်ပညာ တိုးပြားလာသူဖင်ႛ အတဉံ အေုကာင်းအကဵြိး အကောင်းအဆိုးကို ဇာနာတိ သိ၏၊ ဥာတော အတေဉာ အသိဥာဏ် ပညာ ရြိသူသည် သုခၝ၀ဟော မိမိခဵမ်းသာမြ၊ သူတပၝးခဵမ်းသာမြ ကို ဆောင်ရကြ်ိုိံင်၏ …. " အဲဒီလို ဗုဒ္ဌကဟောပၝတယ်၊၊
ကေဵာင်းသား အပေၝင်းတိုႛသည်လည်း သည်ကေဵာင်းတော်ုကီးက အဆုံးအမ။ သံဃာတော်မဵားရဲႛ အဆုံးအမတိုႛကို ဘ၀တငြ် ထာဝရ သယ်ဆောင်ူပီး မိသားစုအကဵြိး၊ တိုင်ူးပည်အကဵြိး၊ ကမ္တာအကဵိုးကိုငိမ်းခဵမ်းစြာ၊ ရဲရင့်စြာ၊ စနြ်ႛလတြ် စနြ်ႛစား ဆောင်ရကြ်ိုံင်ပၝစေ လိုႛ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပၝတယ်။
အားလုံး ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်ိးံငြ်ႛတကြ အားလုံးကမ္တာသူ ကမ္တာသားတြေ ကိုယ်စိတ်ိံစြ်ူဖာ ခဵမ်းသာုကပၝစေလိုႛူမန်မိာုိံ်င်ငံ ဗုဒ္ဌဘာသာ ရဟန်းတော်မဵား ကိုယ်စား ဘုန်းဋ္ဌကီးက ဆုတောင်းမေတ္ဇာ ပိုႛသလိုက်ပၝတယ်၊၊
မဝေးလသြည့် အနာဂတ်မြာ သည် တက္ကသိုလ်ုကီး နဲႛ ဧည့်သည်တော် အားလုံးကိုမန်မာသံဃာတော်မဵားကူမန်မာူပည်မြာူပန်လည် ပင့်ဖိတ်ူပီး ဂုဏ်ူပပြဲ ကဵင်းပူပီး ကေဵးဇူးတင်တဲ့ အခန်းအနား ကဵင်းပိုံင်လိမ့်မည်ဟု မ္တွော်လင့်ပၝတယ်။
Commencement Speech by Sayadaw U Kovidabhivamsa
Dear Venerable Sangha (monks) in Burma,
Today is the 5th waxing day of the month of Natdaw, B.E. 1369 [according to the Burmese calendar] and December 14, 2007 [according to the Gregorian calendar].
From the Commencement Ceremony for USF Graduate Students currently being conducted at the Saint Ignatius Church on the USF (Jesuit University of San Francisco) campus, I am letting all the monks – hundreds of thousands -- in Burma know that you have been collectively awarded an Honorary Degree in recognition of your courage, loving kindness, compassion and commitment to conduct non-violent protests againstabrutal, repressive, military regime.
I am thrilled and honored to accept the Honorary Degree on your behalf.
You should feel extremely honored because USF hasalong tradition of recognng the heroic efforts of people, who – like all of you -- are willing to give up possessions and make the supreme sacrifices in order to secure the human and democratic rights of people especially those living “in constant fear” under oppressive dictators.
USF honored six members of the Society of Jesus were killed in El Salvador – nearly twenty years ago -- for their courageous denunciations ofarepressive government. In 2003, USF conferred an honorary degree to His Holiness the Dalai Lama.
USF is continuing the tradition by honoring you – all the courageous monks in Burma – for upholding your noble beliefs and actions. On your behalf, I would like to express my heartfelt thanks to USF.
Dear Members of the Board of Trustees, Faculty members, Family members of Students, and Honored Guests,
This honorary degree being conferred to the courageous monks of Burma is living proof that people all around the world do care about the plights of those being brutally tortured and killed by repressive military dictatorships that have no conscience about human and democratic rights.
This University is leading by example to other institutions in the free world – academic, religious, social, local, regional, global – that they should recognize the hardships of people “forced to be voiceless and suffer silently for decades” and that they could and should help the courageous people who have put their lives on line to lead non-violent protests against the heartless regimes especially those who consider “chanting of loving kindnessacrime”.
The Burmese monks all over the world are unified under the recently formed International Buddhist Monks Association called Sasana Moli. To help the noble cause of the courageous monks inside Burma (who constantly face torture and death), the monks outside of Burma are working with people and organizations wishing to bring back peace and happiness to the world in general, and Burma in particular. The honorary degree given by USF definitely gives all of us – inside and outside Burma – much needed encouragement and conviction to carry on our noble tasks.
Dear Graduate Students attending Commencement,
On behalf of the monks of Burma, I would like to congratulate you for completing graduate studies from USF, which is known not only for its excellent academic and extracurricular programs, but also for its mantra: “educating minds and hearts to change the world.”
The University mantra is in complete agreement with the teachings of Buddha. He said, in “Thera” verse 141
A paraphrase is as follows:
If one studies [diligently] underamentor, one gains bahusuta (general knowledge).
Bahusuta gives rise to nana (wisdom) and learning (education).
Wisdom and learning enables one to reason: differentiate the good and the bad, the right and the wrong.
An educated mind, then, is able to do good things not only for one, but for others as well.
May you be able to use the University mantra, the education provided by the University and the faculty, and words of wisdom provided by the monks and other religious practitioners to lead good lives and to help work for the benefit of your families, your organizations, your nation, and the world. May you have the courage to make sacrifices – if and when needed – to help bring peace on earth.
On behalf of the monks in Burma, I wish physical and spiritual well-being for all working or studying in USF, to all those attending this ceremony, and to the people all over the world.
I hope that in the not-too-distant future, the monks in Burma will be able to reciprocate the generosity of USF by inviting all of you over to Burma to attenda“Thanksgiving” ceremony.
Signed – U Kokida
Sasoeyein U Kovida gave speech at USF on behalf of Burmese Monks
သာသနာ့မောဠိ ပဓာနစေရ မစိုးရိမ် ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ
USF ဘြဲႚိံငြ်းသဘင်တငြ်ူမန်မာူပည် သံဃာတော်မဵားကိုယ်စား
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႚ လက်ခံစဉ်ူမန်မာ သံဃာတော်မဵားထိံငြ့်
ကမ္တာုကီးသိုႚ မိန်ႚုကားသည့် မိန်ႚခနြ်း ကောက်ိုံတ်ခဵက်
အသံကောက်ိုံတ်ခဵက် ကို ဒီမြိာိံပ်ူပီး နားဆင်ပၝ
Posted by MoeMaKha at 10:14 PM No comments:
ထိုင်းနယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်လာရသော မြန်မာရဟန်းတော်များကို သာသနာ့မောဠိက ကူညီဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
ထိုင်းနယ်စပ်သိုႚ တိမ်းရြောင်လာရသောူမန်မာရဟန်းတော်မဵားကို
ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇
စက်တင်ဘာ သံဃာအရေးတော်ပုံကို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက်ြိံမ်ိံငြ်းခဲူ့ပီး၊ ယခုအခဵိန်အထိ စစ်အစိုးရသည် သံဃာတော်မဵားကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီူးခင်း၊ြိံပ်စက်သတ်ူဖတ်ူခင်း၊ ဖမ်းဆီးထောင်ခဵူခင်းတိုႚအူပင် ခိုကိုးစရာ မရြိအောင် ကေဵာင်းတိုက်မဵားကိုပၝ ခဵိတ်ပိတ်ူခင်း၊ ပိတ်ဆိုႚရငြ်းလင်ူးခင်းတိုႚ ကဵြးလန်ြလဵက်ရိသြည်။ သိုႚအတကြ် သံဃာတော်မဵားသည် ထိုင်ိးိုံင်ငံ နယ်စပ်ဒေသမဵားသိုႚ တကြဲတူပား ထကြ်ေူပးတိမ်းရြောင်နေရသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသမဵားတင်ြလည်း သံဃာတော်မဵားသည် ကိုယ်၊ စိတ် ဆင်းရဲစြာ ခဵြိူးခူံပီးနေထိုင် နေရသည့် အေုကာင်း နယ်စပ်ဒေသရောက်ူမန်မာမိသားစုမဵားက အေုကာင်ုးကားသူဖင့်ူပည်ပရောက်ူမန်မာ ဆရာတော်မဵာူးဖင့် ဖြဲႚစည်းထားသော သာသနာ့ဥသ္တွောင် အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးက နယ်စပ်ရောက် ရဟန်းတော်မဵား ၏ လုံခြံရေး၊ ပင်္စည်း ၄ပၝး မ္တွတစေရေးတိုႚအတကြ် အတတ်ိုံင်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်းေုကာင့်ုကစိုက်ူပီး ဆောင်ရက်ြလဵက် ရြိေုကာင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရ၏ မတရားမမြဵား၊ အုကမ်းဖက်မမြဵားေုကာင့် တိမ်းရြောင်လာရသော သပိတ်မြောက် ရဟန်းတော်မဵား တစည်းတလုံးတည်း အဆင်ေူပ ခေဵာမြေႚသည့် သင့်တော်သော အရပ်ဒေသတငြ် သီတင်းသုံိးိုံင်စေရေး၊ သာသနာရေး၊ ဘာသာရေး ကိင်္စမဵားကို ၀ိနည်ိးံငြ့်အညီ ဆက်လက် ကဵင့်သုံးဆောင်ရကြ်ိုံင်ရေးတိုႚကို အဓိက ရည်ရယ်ြလ္တွက် သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးမြ ဆရာတော်မဵားက ဆရာ၊ ဒကာမဵားက မေတ္ဇာ၊ စေတနာတိုႚူဖင့်၊ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီုကစေရန်ုကိဆြိုပၝေုကာင်း သာသနာ့မောဠိူပန်ုကားရေး တာဝန်ခံ ဆရာတော် ဦးပညာနိံ္ဋ (နယူးယောက်) က မိုးမခ သိုႚ ရငြ်းလင်းေူပာုကားပၝသည်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒ၊ ပီနန်ဆရာတော်ုကီး ဦးပညာဝံသ တိုႚကို ဦးတည်ူပီူးဖစ်စေ၊ိုံင်ငံတကာ ဒေသမဵားတငြ် ဖြဲႚစည်းထားသော သာသနာ့မောဠိ ဒေသဆိုင်ရာ အဖြဲႚမဵားမြ ဆရာတော်မဵားသိုႚူဖစ်စေ ဆက်သယြ် လ္တွောက်ထာူးပီး ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရကြ်ုကစေလိုေုကာင်း သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြမလြည်း အခဵိန်အခၝ သင့်ူမတ်သည်ိံငြ့် ဆရာ၊တကာမဵားသိုႚ သတင်းထုတ်ူပန် အသိပေးနေမည်ူဖစ်ေုကာင်း အတငြ်းရေးမြးဆရာတော် ဦးဂုဏိသရကူဖည့်စကြ် မိန်ႚုကားပၝသည်။ ဦးဆောင် ဆရာတော်ုကီးမဵာိးံငြ့် သတ်မတ်ြထားသည့် ကိုယ်စာူးပြ ဆရာတော်မဵား ကိုယ်တိုင်လည်း အူမန်ဆုံး သြားရောက်တြေႚဆုံမည်ူဖစ်ေုကာင်း သိရြိရသည်။
မိုးမခ စာနယ်ဇင်းအဖြဲႚကလည်း ၄င်းတိုႚ၏ အုကံပေး အမဆြောင်လူုကီးမဵာူးဖစ်သောေုကးမုံဦးသောင်း၊ မောင်စမြ်းရည်၊ ဦးဝင်းဖေိံငြ့် မာမာအေးတိုႚ ထုတ်ူပန်ထာူးပီူးဖစ်သည့်၊ သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပြ်ုကီး၏ သာသနာရေး၊ တိုင်ူးပည်ူငိမ်းခဵမ်းရေး ဆောင်ရက်ြခဵက်မဵားကို လိုက်နာဆောင်ရက်ြမည်ဟု ကတိူပထြားသည့်အတိုင်း တတ်ိုံင်သည့် တထောင့်တနေရာမြ ဆောင်ရက်ြပၝမည့်အေုကာင်း လေဵာက်ထားခဲ့ေုကာင်း တင်ူပအပ်ပၝသည်။
(ဓာတ်ပုံမြာ နယ်စပ်ဒေသတငြ် တြေႚရသည့် ဘုန်းတော်ုကီးမဵား သီတင်းသုံးရလေ့ရြိသော ကေဵာင်းဆောင်)
Posted by MoeMaKha at 12:12 PM No comments:
မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ အမေရိကန်အနောက်ခြမ်း ခရီးစဉ် - တရားနာရန် ဖိတ်စာများ ထွက်ရှိ
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ မှ မြန်မာမိသားစုများ၏ ဖိတ်စာ - ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၁၆ ရက်နေ့များ
ဘေးဧရိယာရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့များ၊ လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံ မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ - ဒီဇင်ဘာ ၁၇
အာရီဇိုးနား၊ ဖီးနစ်မြို့မှ မြန်မာမိသားစုများ၏ ဖိတ်စာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့
လော့အိန်ဂျလိစ် အရပ်မှ မြန်မာမိသားစုများ၏ ဖိတ်စာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့
Posted by MoeMaKha at 9:57 PM No comments:
သာသနာမောဠိ အဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံတကာ အစဉ်အစဉ်များ
အာရ်အက်အေ ( ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၇)
ူမန်မိာိုံင်ငံအရေးအတကြ် သာသနာမောဠိအဖြဲႚက ဆရာတော်တြေ အဖြဲႚခြ္ဘဲပီး အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာကို ခရီးလညြ့်လည် ဆောင်ရက်ြနေုကတာူဖစ်ပၝတယ်။
အဖြဲႚရဲႚဥက္ကဌ ဆရာတော် ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ ဦးစီးတဲ့အဖြဲႚဟာ ဒီကနေႚ ဂဵပန်ိုံင်ငံနာဂိုယ္ဘာမြိႚကို ရောက်ရြိန္ဘေပီး အတငြ်းရေးမြး ဆရာတော် ဦးဥတ္ဇရဟာလည်း အီတလီိုံင်ငံက ကိုလိုနီယိုမန်ြဆေးဆေး္ဘမြိႚတော်ဝန်ရဲႚ ဖိတ်ုကားခဵက်အရ အဲဒီမြာ ရောက်ရြိနေပၝတယ်။ အဲဒ္ဘီမြိႚက တိဘက်ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး ဒလိုင်းလားမားကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႚတံဆိပ် ခဵီူးမငြ့်တဲ့အခမ်းအနားမြာ တိဘက်နဲႚူမန်မိာိုံင်ငံက ဘာသာရေြးိံပ်ကပ်ြခံရမူတေကြို အီတလီူပည်သူတေကြို တင်ူပုကမြာူဖစ်ပၝတယ်။
ဂဵပန်ိုံင်ငံ၊ နာဂိုယ္ဘာမြိႚကိုရောက်နေတဲ့ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသနဲႚ အဖြဲႚဟာ နာဂိုယာရြိ ဂဵပန်ဗုဒ္ဌဘာသာ ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်းမဵားကို လညြ့်လည်သြားရောက်ခဲ့သလို ဂဵပန်ိုံင်ငံ ဗုဒ္ဌဘာသာ အဖြဲႚခဵပ်ြရဲႚ ဒုတိယနာယက ဆရာတော်နဲႚလည်ူးမန်မိာိုံင်ငံအရေးနဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး ဆြေးြေိံးမတြေ လုပ်ခဲ့ပၝတယ်။
ဒၝ့အူပင် ဒီကနေႚမနြ်းလြဲပိုင်းက အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာ လတ်္ဘြငိမ်းခဵမ်းသာခငြ့်အဖြဲႚ AIက ဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပတဲူ့မန်မိာိုံင်ငံအတကြ် ဆုတောင်းပြဲကိုလည်း ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတြေ တက်ရောက်္ဘပီူးမန်မိာိုံင်ငံအေုကာင်း ဟောေူပာတာတြေ လုပ်ခဲ့တယ်လိုႚသိရပၝတယ်။
Posted by MoeMaKha at 11:52 AM No comments: